Joe Exotic oghere nyochaa (RTP: 95.7%) - cheapinternetsecuritysoftware.com
Joe Exotic na-enye ndị na-egwu egwuregwu Red Tiger ohere ịbanye ụwa nke nnukwu nwamba, egbe ọjọọ, na n’ezie, egwu obodo. Egwuregwu egwu ya nwere njikọta nke isiokwu ọhịa na ihe “glitz na glam”. Ọbụna ụda ụda ya sitere na onye isi agwa n’onwe ya ka Joe Exotic ga-ejikwa isi gị karịa.
Ozugbo ị dị njikere iburu njem na America ma nweta ụdị ndụ pụrụ iche nke Joe, egwuregwu a na-arụ ọrụ. Atụmatụ ya na-abanye na grid ya na 5 reels, ahịrị 4, na usoro ịkwụ ụgwọ 20. N’ihi na ala dị ka £ 0.10, ị nwere ike igwu egwuregwu a nke nwere 95.7% RTP na ruo 4,117x kacha jackpot.
Reels: 5Rows: 4RTP: 95.7% Min nzọ: £ 0.1Max nzọ: £ 20Paylines: 20Max mmeri: 4,1170x
Joe Exotic oghere imewe
N’ụwa ntụrụndụ, ịhụ nnukwu ihe nkiri na ihuenyo bụ ihe dị mma n’oge a. Enweghị oke ókè ugbu a ma a bịa n’ịmepụta mkpụrụedemede anyị n’echiche. Ya mere, ihe odide dika Joe Exotic nwere mmetụta dị ukwuu n’ahụ ndị mmadụ. Ruo ihe karịrị afọ 2, ọ bụ onye nwe ya na onye ọrụ ya na Greater Wynnewood Exotic Animal Park na ndụ n’ezie.
N’ime ndụ ya niile na nnukwu nwamba ahụ, Joe rụrụ ihe ngosi TV n’ịntanetị na akụrụngwa na-agafe mba ahụ nke mere ka ndị mmadụ na-ata ụmụ ha agụ. Nke a dọtara uche nke ọtụtụ ndị mmadụ ọkachasị na ụlọ ọrụ ntụrụndụ nke mere ka ọ bụrụ ihe zuru ụwa ọnụ. Yabụ, nke a bụ Joe Exotic Slot bụ egwuregwu egwuregwu na-atọ ọchị iji lebakwuo anya na Tiger King a ma ama.
N’ileghachi anya na grid, o juputara na akara dika okpu baseball, eriri eji akpukpo aru nke umu anumanu, mgbaaka, na ikpu. E nwekwara ndị a ma ama dịka James Garretson, Jeff Lowe, Allen Glover, na ndị ọzọ.
Joe Exotic oghere atụmatụ
N’ihe banyere atụmatụ egwuregwu ahụ, Joe Exotic nwetara ihe niile edepụtara na ntanetị ya na 5 reels na ahịrị 4. Joe Exotic nwere ọtụtụ atụmatụ ego maka enwere ọtụtụ ihe na-aga n’ihu. Enwere atụmatụ Dynamite yana Tiger Bounty, Election Time, na ụfọdụ Spins Spins.
Iji mee ka egwuregwu ahụ nwaa, Red Tiger Gaming kwadebere ego ndị a n’ụzọ. Ya mere, ka anyị lebakwuo anya na njirimara nke ọ bụla na-arụ ọrụ n’okpuru:
Nke a Dynamite mma nwere ike ịmalite site na nke ọ bụla n’ime spins gị n’oge egwuregwu egwuregwu ma ọ bụ isi atụmatụ ego. Mgbawa nke Dynamite na esi anwụde na-ewepu akara niile akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ. Ozugbo arụ ọrụ a gasịrị, atụmatụ Cascading Reels ga-agbaso nke na-egosipụta akara ngosi dị elu naanị. Yabụ, a na-eme ka ị nweta ụgwọ ịkwụ ụgwọ iji tinye akara ngosi ọhụrụ.
Maka njirimara Tiger Bounty, ịchọrọ akara akara Tiger Bounty iji kpalite ya. Ihe nnọchianya ndị a pụtara na reels nke 1st, 3, na nke 5th. Dabere na ọdịmma gị, njirimara Tiger Bounty a na-enweghị ike inye gị ụgwọ ọrụ dịka ihe ndị a:
5x15x25x50x your total osisi
Yabụ, ndị a bụ onyinye ndị Joe nyere Allen maka opekata mpe 4x. Yabụ, ị nwere ike imeri onyinye ọ bụla Allen nabatara.
Oge Ntuli Aka
Ewezuga atụmatụ ego dị n’elu, Joe Exotic nwetakwara oge ntuli aka n’okpuru aka ya. Atụmatụ a nwere ike ịmalite mgbe ọ bụla ị rutere Joe Pin na 1, 3, na 5th reels. Rịba ama na akara ntụtụ Pin ndị a kwesịrị ịdata na aka nri n’otu oge. Ndị na-aga agha gụnyere Joe, Jeff, James, na Allen ndị niile nọ n’okpuru nchịkọta 12 Vote Pins.
Nhọrọ Oge Ntuli aka na-enye ndị egwuregwu ohere ịhọrọ atụdo nke na-ekpughe ndị aga-aga aghara aghara ruo mgbe akara akara 3 pin. Ndi umu akwukwo ndia gha enweta ugwo Multiplier na-esote nke inwere ike n’akpa maka ndi mmadu ato na ato:
James Garretson = 5x osisi gịAllen Glover = 20x osisi gịJeff Lowe = 50x osisi gịJoe Exotic = 150x osisi gị
Ebe ọ bụ na Joe Exotic bụ aha egwuregwu a, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya nwekwara ụgwọ ọrụ metụtara ya.
Tupu ịmalite igwu egwu, ị gaghị echefu ohere iji rụọ ọrụ Bonus Spins ma ọ bụ Exotic Spins. Iji rụọ ọrụ a, naanị ị ga-enweta akara akara Scatter nke akara ngosi Exotic Spins na-anọchi anya ya. Ihe nnọchianya ga-adaba n’otu oge na 1st, 3rd, na 5th na-esote iji nweta 9 Exotic Spins.
N’ime oge a, akara ngosi Joe Exotic Super Multiplier Wild ga-egosikwa n’elu igwe iji nyere gị aka. Nke a Super Multiplier Wild akara nwere ike dochie niile mgbe akara na jupụta niile ọnọdụ n’etiti esi anwụde. Nke a na – eme ka ọ bụrụ Anụmanụ Ahịa nke nwere uru malitere na 1x. Oge ọ bụla ị rutere nchịkọta mmeri na akara ngosi a pụrụ iche, uru nke akara a na-abawanye site na 1.
Winningsnweta mmeri na-esote ya na akara a nwere ike inye gị nnukwu ụgwọ ọrụ nke nwere ike ịba ụba ruo 15x osisi gị. Mana ọ bụrụ na ị daa akụkụ nke akara Scatter na 1st na 5th na-atụgharị mgbe njirimara a na-arụ ọrụ, ị ga-atụgharị ya. Ya mere, ị ga – enweta 5 ọzọ spins na mkpokọta gị daashi ma ọ bụ Exotic Spins. Y’oburu n’inwe obi oma ichogharia otutu ihe a otutu oge, inwere ike inweta onu ogugu nke Bonus Spins.
Joe Exotic RTP, ịkụ nzọ, na onyinye
Joe Exotic nwere usoro ịkwụ ụgwọ 20 ị nwere ike nzọ na. Iji mepụta ngwakọta na-emeri, ị ga-egbutu akara ngosi 3, 4, ma ọ bụ 5 ma ọ bụ ọbụna akara Wild. A na-akwụ ụgwọ akara mmeri site n’akụkụ aka ekpe ruo na njedebe ikpeazụ na ntanetị. Ma mbụ, ị ga-eso egwuregwu chọrọ kacha nta nzọ nke bụ 10 0,10, na a kacha nzọ nke £ 20 kwa atụ ogho.
Gbanwe nzọ gị, pịa bọtịnụ + na – bọtịnụ n’akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ruo mgbe afọ juru gị. Enwekwara ọrụ Auto Spin nke nwere bọtịnụ Turbo na-adị n’okpuru akara ndị nwere ike ime ka egwuregwu gị dị ngwa. Agbanyeghị, atụmatụ abụọ a dịịrị ndị egwuregwu UK ruo Ọktọba 2021 naanị. Ka o sina dị, ị ka nwere ike ịnụ ụtọ egwuregwu ahụ site n’ilekwasị anya na atụmatụ ya na ego ya.
Joe Exotic bụ egwuregwu egwuregwu na-agbanwe agbanwe nke nwere 95.70% RTP nke a ka na-anabata ma dị n’okpuru ọkwa larịị. Dị ka nnukwu egwuregwu dị iche iche, ọtụtụ ihe mmeri na egwuregwu a sitere na Bonus Spins gburugburu. Ọmụmaatụ, otu mmeri na egwuregwu a nwere ike inye gị a kacha payout na bụ 4,117x gị osisi.
Gịnị bụ RTP na oghere Joe Exotic?
Oghere Joe Exotic nwere 95.7 RTP, nke dị ala karịa nkezi, ọ bụ ezie na ọ na-ahụkarị egwuregwu Red Tiger.
Kedu ndị na-eweta egwuregwu wepụtara Joe Exotic?
Golden Glyph 2 mepụtara Red Tiger Gaming, nke Evolution Gaming nwere.
Gịnị bụ volatility na Joe Exotic?
Golden Glyph 2 bụ oghere dị elu.
Joe Exotic mmechi
Anyị amatalarị otu Red Tiger Gaming si dị mma ma a bịa n’ihe gbasara oghere. Ma na Joe Exotic, ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ dị mma nke ịgbalị ịmeghachi Tiger King. Ọ nwere atụmatụ ego dị iche iche nke na-edugakwa na Spins Bonus na-akparaghị ókè. Ya mere, enwere ohere iji merie karịa ma ọ bụrụhaala na ị na-echegharị atụmatụ Exotic Spins.
Joe Exotic nwere ezigbo Multipliers ndị nwere ike inyere gị aka ịkwalite mmeri gị n’agbanyeghị na ọ nweghị nnukwu RTP. N’agbanyeghị nke ahụ, ezigbo jackpot na Bonus Spins na-akparaghị ókè na-enye egwuregwu ahụ nsogbu. Maka ndị egwuregwu ahụ chọrọ usoro Netflix dị jụụ na egwuregwu oghere, Joe Exotic kwesịrị oge gị. Iji kpọọ oghere a na ọnọdụ n’efu, ị nwekwara ike lelee ndepụta anyị nke casinos nyere ikike n’elu.
Tags:Exotic Joe nyochaa oghere RTP
Ntuziaka dị mkpa na NetEnt’s Street Fighter II Slot: LiveRoulette Blog
Ofwa nke egwuregwu vidio bụ ebe dị iche iche dị …